I-Pixelrama: Mahhala, Vula, Isihleli Sesithombe Se-Cross-Platform 2D | Kusuka ku-Linux
Ukufaka kwe-Linux Post | 17/04/2022 06:00 | I-GNU / Linux
Yebo, abaningi bethu abathanda ubuchwepheshe banokuthile abafana ngakho, kungakhathaliseki ukuthi bakhulu noma bancane, kuwukuthanda ubuhle. ubuciko be-pixel(noma ubuciko be-pixel, ngesiNgisi)ikakhulukazi lezo esizisebenzisayo I-GNU / Linux kanye nalo Imvelo ye-CLI ubuswa ukusetshenziswa kwe ukuphela.
Ngakho, yebo kusukela usemncane noma njengamanje uthanda izithombe ezibukeka njengemidlalo yamavidiyo amadala yamakhompyutha, ama-game consoles kanye nomakhalekhukhwini, bese kuthi ubuciko be-pixelokuyinto a isitayela somfanekiso wedijithali i-nostalgic ne-retro 8 bit isitayela, Uzoyithanda. Futhi leli thuluzi elihle lizoba usizo kakhulu kuwe ohlelweni lwakho lokusebenza lwamanje, kungaba njalo Windows, macOS noma GNU/Linux.
I-Pinta: Yini entsha mayelana nalolu hlelo lokusebenza lwamahhala lokuhlela izithombe?
Futhi njengenjwayelo, ngaphambi kokungena esihlokweni sanamuhla esiwusizo nesithakazelisayo izinhlelo zokusebenza zokuphatha imidiya, futhi ikakhulukazi mayelana "Pixelrama", sizoshiya kulabo abathanda izixhumanisi ezilandelayo kwabanye okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene. Ngendlela yokuthi bangazihlola kalula, uma kunesidingo, ngemva kokuqeda ukufunda le ncwadi:
“I-Pinta iwuhlelo lokusebenza olulula noluwusizo lokuhlela isithombe olusanda kubuyekezwa ukuze lube yinguqulo 1.7.1. Ngaphezu kwalokho, iwuhlelo lomthombo wamahhala noluvulekile oluhlose ukunikeza abasebenzisi indlela elula kodwa enamandla yokudweba nokukhohlisa izithombe ku-Linux, Mac, Windows, kanye *BSD.” I-Pinta: Yini entsha mayelana nalolu hlelo lokusebenza lwamahhala lokuhlela izithombe?
I-MyPaint: uhlelo lokusebenza lokudweba olukhuthaza umkhiqizo
1 I-Pixelrama: Ithuluzi lokudala ubuciko be-pixel bomthombo wamahhala nomthombo ovulekile
1.1 Yini i-Pixelrama?
I-Pixelrama: Ithuluzi lokudala ubuciko be-pixel bomthombo wamahhala nomthombo ovulekile
Yini i-Pixel Art?
Kulabo abangazi okuningi ngale nto esikhuluma ngayo, i Ubuciko bePixel Kuyinto a ifomu lobuciko bedijithali, idalwe kusetshenziswa ikhompuyutha izinhlelo zokuhlela ihluzo ze-raster, lapho izithombe zikhona ihlelwe ezingeni lephikseli. Futhi njengoba ikhona hex, evaliwe futhi ekhokhelwa iWindows; ikhona "Pixelrama", evulekile futhi mahhala ku-GNU/Linux.
"I-Pixel art yazalwa ngeminyaka yawo-1970, nakuba ekuqaleni yayiluhlaza kakhulu uma iqhathaniswa nobuciko bedijithali banamuhla. Ubuciko be-Pixel noma ubuciko be-pixel wuhlobo lobuciko bedijithali obubonakala budalwe ngenhloso ngokusekelwe ekuhleleni amaphikseli. Ibhulokhi ngayinye iyi-brushstroke; futhi, ndawonye, ​​amaqembu amaphikseli akha ucezu oluphelele. Ngale ndlela, ubuciko be-pixel bunekhwalithi efana ne-mosaic; ama-mosaic amaningi enza izithombe ezinezimo ezincane, ezifana kakhulu nobuciko be-pixel". Yini i-Pixel Art?
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni, leli thuluzi ledijithali lichazwe kafushane kanje:
"Kungumhleli wamahhala nomthombo ovulekile wesithombe se-2D (sprite), esenziwe ngenjini ye-Godot, kusetshenziswa i-GDScript. Itholakala ku-Windows, Linux, macOS, futhi ngokuqondile kuwebhu".
Phakathi kwezici zayo zamanje singabala okulandelayo:
Iwumthombo wamahhala novulekile. Futhi okwamanje isenguqulo yayo engu-0.9.2, ekhishwe ngedethi, 21/01/22, enosayizi olinganiselwa phakathi kuka-16 MB (weWindows ne-Linux) kanye no-32 MB (we-macOS).
Kuhlanganisa amathuluzi ahlukene angu-16 okwenza lula imisebenzi yokudweba, enganikezwa nezinkinobho zegundane kwesokunxele nakwesokudla.
Inomugqa wayo wesikhathi wokugqwayiza. Ukwenza kube nokwenzeka ukusebenza kuseli ngalinye ngalinye, lapho iseli ngalinye libhekisela kusendlalelo esisodwa nohlaka. Isekela ukuhlinza u-anyanisi, ukuxhumanisa amaseli, umdwebo onyakazayo, nokuqoqwa kozimele omakiwe.
Inamabhulashi angokwezifiso, okuhlanganisa namabhulashi angahleliwe. Futhi ikuvumela ukuthi udale noma ungenise amaphalethi angokwezifiso.
Ivumela ukugcwaliswa kwephethini. Ngakho-ke, ungasebenzisa ithuluzi lebhakede ukugcwalisa indawo ngephethini oyikhethile.
Ivumela ukungeniswa kwezithombe kanye nohlelo lwazo. Futhi, uma amafayela amaningi angenisiwe, azokwengezwa njengozimele bopopayi abangabodwana. Kungenzeka futhi ukungenisa amashidi e-sprite.
Khipha imisebenzi ekhiqiziwe njengamafayela e-PNG noma e-GIF. Kungenzeka futhi ukuwathumela njengamashidi e-sprite.
Ifaka imodi yokuphelela kwe-pixel yemigqa elungile, eyepensela, irabha, kanye namathuluzi enza kube lula/abe mnyama.
Inokusekelwa kokulondoloza okuzenzakalelayo, nokutholwa kwedatha esimweni sokuphahlazeka kwesofthiwe.
Linganisa, nqampuna, zungezisa, phenya, guqula umbala, lungisa i-HSV, qeda, futhi uguqule futhi wenze izithombe zakho zibe nkulu. Phakathi kwezinye izici eziningi ezinhle.
Futhi into engcono kakhulu ukuthi kungaba ilandiwe futhi yafakwa kalula, noma isetshenziswe ku-inthanethi ngokulandelayo isixhumanisi.
Ngeminye imininingwane nge I-Pixelorama ungahlola izixhumanisi ezilandelayo: UGodot, Isinyoka, I-Flathub, futhi uma kwenzeka ufuna ukwazi ezinye izindlela ezivulekile nezimahhala, chofoza lesi esinye isixhumanisi: Okunye Okunye.
"Umgomo omkhulu walolu hlelo wukukwazi ukufinyelela emcabangweni womsebenzisi futhi umsize enze noma yiluphi uhlobo lobuciko be-pixel alufunayo. Kungaba indawo epholile, ukugqwayiza okupholile, imidwebo yegeyimu, imidwebo engahleliwe, noma i-meme ecatshangelwe kahle.". Imibhalo esemthethweni
Ngokufingqa, "Pixelrama" Kuyinto a ithuluzi lokudweba elipholile, mahhala futhi livulekile, okuzokwenza kube lula kwabaningi, kungakhathaliseki ukuthi bangochwepheshe endaweni yokudweba, ukuze bakwazi ukukhiqiza izithombe ezinhle ngaphansi kwalokhu okukhangayo. Isitayela se-retro esingu-8 bit. Ukuthi, ngokwesibonelo, ufuna ukukhiqiza izithombe ozozisebenzisa njenge ama-logo kutheminali, noma ukukhiqiza izithonjana zohlelo, amaphephadonga amahle. Futhi kuze indalo emangalisayo yedijithali, engase iguqulelwe ekubeni ama-NFT ayigugu, ngaphakathi kwezinkundla ezifana I-OpenSea.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Pixelrama: Yamahhala, Evulekile, Isihleli Sesithombe Se-Cross-Platform 2D
I-GPT-4: I-AI yokucubungula ulimi lwemvelo ye-OpenAI ingafika kamuva kule semester
Inguqulo entsha ye-LXQt 1.1 isivele ikhishiwe, yazi ukuthi yini entsha